Sales Supervisor Archives - Page3of3- Glory Assumption Space
Sales Supervisor - Male (7) posts / Salary - 250,000 Above kyat.
***************** Urgent Requirement ****************** မင်္ဂလာပါGASနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောရွှေပြည်သာမြို့နယ်ရှိသော ကုမ္ပဏီများတွင် အောက်ပါဝန်ထမ်းများလိုအပ်နေပါသည်။ 1. Sales Supervisor - Male (7) posts / Salary -250,000 Above kyat / Shwe Pyi Tar Township . - ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ Sales & Marketing Certificate ရရှိထားလျှင် ပို၍သင့်တော်သည်။ - အသက် (၂၅)နှစ်မှ (၃၀)နှစ်အထိ ။ Microsoft Office Excel အသုံပြုနိုင်ရမည်။ - Sales & Marketing Fieldတွင် အတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး(၄)နှစ်ရှိရမည်။ - ရေသန့်နှင့်အချိုရည်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချရေးတွင် အတွေ့အကြုံရှိသူကို ဦးစားပေးမည်။ - ရန်ကုန်မြို့တွင်းလမ်းကြောင်းများကို ကျွမ်းကျင်နှံ့စပ်သူဖြစ်ရမည်။ - Customer Relationship Managementကို ကျွမ်းကျင်နှံ့စပ်စွာသိရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ - Targetထိအောင် ရောင်းနိုင်ရမည်။ - Customer များနှင့် ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone No - 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ )
မင်္ဂလာပါရှင့် ။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Company ကြီးများတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည်။ Sales Supervisor- Female (5) Posts/Salary- 200,000 Kyats/Mayangone Township. - Any Graduate - Experience2Years မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail-gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com Phone No.- 09- 263119775, 09-262223785,09-977397705,09-263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ –MyanmarProfessionalTraining Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။
Sales Supervisor –Male (6) posts
Sales Supervisor –Male (6) posts/ Salary-200,000 Kyat / Kamayut Township - ဘွဲ့ရ - အသက် (၃၅) နှစ်အောက် - Sales နှင့်သက်ဆိုင်သော Diploma (သို့) Certificate ရရှိထားသူဦးစားပေးမည်။ - Beverages & FMCG နှင့်ပတ်သတ်၍ Sales Supervisor ရာထူးဖြင့်အတွေ့အကြုံ (၂) နှစ်ရှိသူဖြစ်ရမည်။ - အပြောအဆိုပြေဖြစ်ပြီး ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ - နယ်မြေဗဟုသုတရှိပြီး၊ နယ်ခရီးသွားလာနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
Sales Supervisor – Male/Female (7) Posts
************** URGENT REQUIREMENT ****************** မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Co.,တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အောက်ပါဝန်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ 1. Sales Supervisor – Male/Female (7) Posts / Salary 250000 kyats/ Shwepyithar Township - ဘွဲ့ ရဖြစ်ရမည်။Sales&Marketing Certificate ရရှိထားလျှင် ပို၍သင့််တော်သည်။ - Sales&Marketing field တွင်အတွေ့ အကြုံအနည်းဆုံး (၄)နှစ်ရှိရမည်။ - အသက် (၂၅)နှစ်မှ(၃၀)နှစ်အထိ။ - ရေသန့် နှင့်အချိုရေဖြန့် ဖြူးရောင်းချသည့်လုပ်ငန်းတွင်အတွေ့ အကြုံရှိသူကိုဦးစားပေးမည်။ - ရန်ကုန်မြို့ တွင်းလမ်းကြောင်းကို ကျွမ်းကျင်နှံ့ စပ်သူဖြစ်ရမည်။ - Customer Relationship Management ကိုကျွမ်းကျင်နှံ့ စပ်စွာသိရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ - Target ထိအောင်ရောင်းနိူင်ရမည်။ - ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone No - 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ )
Sales Supervier(Hotel and Restaurant Channel)-(M/F)(5)Posts
မင်္ဂလာပါရှင့် ။ Chemical Product Co.,တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင် ရန်အောက်ပါ ၀န်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ Sales Supervier (Hotel and Restaurant Channel) -(M/F)(5)Posts/ Salary-250000 Kyats/Kyimyindaing Township Requirements - Graduate with any Degree - Minimum2years experiences in sales and marketing field - Pleasant personality,good communication and interperson skill - Ability to work under minimal supervision and be self-motivated,initiative and result oriented - Proficient in MS office software (Word,Excel,)Email ,Powerpoint Perfer) - Fluent in English (can communicate in English) - Able to drive is preferred but not required Responsibilities - Organized sales visits - Demonstrate/pre products - Establish new business/customers - Maintain existing customers - Can manage and lead team Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com Phone No.- 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။
Sales Supervior -M/F(5)Posts/Salary-
မင်္ဂလာပါရှင့်။တာမွေမြို့နယ်တွင်ရှိသော Co.,တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင် ရန်အောက်ပါ ၀န်ထမ်းအမြန်အလိုရှိသည်။ Sales Supervisor – M/F (5)Posts/Salary – 300000 Kyats/Tarmwe Township - ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး ၃ နှစ်ရှိရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com Phone No.- 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။
Sales Supervisor - M/F (7)Post
ဘွဲ့ရ၊ Customer Skill & Interpersonal Skill များ ကျွမ်းကျင်သူ၊ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး(၂)နှစ်ရှိရသူ၊ အသက်(၂၅)နှစ်မှ (၃၀)နှစ် အတွင်းဖြစ်ရမည်။ ညွှန်ကြားချက်များအား အချိန်နှင့်တပြေးညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်တတ်သူဖြစ်ရမည်။ ဈေးကွက်အခြေအနေအားသုံးသပ်ပြီးအရောင်းမြင့်တက်အောင်ကူညီဆောင်ရွက် ပေးနိုင်ရမည်။သွက်လက်တတ်ကြွစွာဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ရန်ကုန်မြို့တွင်း ကျွမ်းကျင်စွာသွားလာနိုင်ပြီးအများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်သူဖြစ်ရမည်။
Location in : ထားဝယ်
Location in : မြိတ်
Location in : တောင်ငူ
Location in : ရခိုင်
Sales Supervisor (FMCG) – Male /Female (5)Posts
- ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ၃ နှစ်ရှိရမည်။ - Customer Complain ဖြေရှင်းနိုင်ရမည်။ - English4Skills ရရမည်။ - Computer ကျွမ်းကျင်စွာသုံးနိုင်ရမည်။
ှSales Supervisor - (10) Posts Female
ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ အသက်(၂၂)နှစ်အထက်ဖြစ်ရမည်။ Cosmetic အပိုင်းတွင်အတွေ့အကြုံ(၂)နှစ်အထက်ရှိရမည်။
GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော ဗဟန်းမြို့ နယ်တွင်ရှိသော Companyကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ Sales Supervisor •	Job Requirements 	Minimum bachelor degree (S1) – Mechanical or Electric Engineering 	Minimum4years of working experience in selling power generation system and generator set 	Minimum2years in sales supervisor position 	Good in English oral and written isamust 	Good in PC (Word,Excel,Power Point,AutoCAD) 	Have leadership skills •	Job Responsibilites 	Responsible for developing accounts and selling Company’s Gas Engine 	Work cooperatively with Company team to effectively develop market and sell Company’s products to other customers. 	Supervising, motivating and monitoring Company team performance; 	Developing and leading our strategy and execution for sales growth in Gas Engines; 	Setting sales or marketing budgets/ targets 	Liaising with customers (which may include actual selling); 	Maintaining detailed knowledge of the company’s products; 	Keeping abreast of what Company competitors are doing and giving suggestion to Company. 	Implement the emergency response in the event of an emergency include ( fires,earthquakes and – riot) 	Perform fisrt aid (PSK) 	Conduct safety induction 	Understand the system K3L (safety,health,labor and environmental ) 	Able to make the job Safety Analyst (JSA) 	Able to identificate potential hazards and control risks to K3L (Safety,health,labor and environmental) 	May conduct inspections as standard K3L (safety,health,labor and environmental) 	Performs other duties as assigned အထက်ပါ လိုအပ်လျက်ရှိသော Job Position များအတွက် E mail ဖြင့်၎င်း၊ လူကိုယ်တိုင်၎င်းလာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr4@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr3@gmail.com Phone No.- 09 262223784, 09 977125251,09 262555438, 09 263121101 ရုံးလိပ်စာ နေရာ ။	။Myanmar Professional Training Centre @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း၊ အမှတ် (၂၉)၊ပထမထပ်၊ လှည်းတန်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်။